भोलि बैशाख २२ गते आइतबार, तपाइको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् तपाईको राशिफल !
बैशाख २१, २०७६ PS
भोलि तपाईलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा धेरै लाभ मिल्ने देखिन्छ। स्त्रीवर्गबाट भनेको जस्तै लाभ मिल्ने हुँदा भोलि तपाईको प्रेम सम्बन्ध पनि राम्रै रहने देखिन्छ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्ने देखिन्छ। मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य धेरै राम्रो रहने भएता पनि भोलि तपाईलाई साँझ भने आर्थिक समस्या पर्न सक्ला।
भोलि तपाईको बौद्धिक क्षमता वृद्धि हुनेछ भने कुनै पनि वैचारिक वाद-विवादमा तपाई सफल हुनुहुनेछ। परिवारका सदस्यहरुसंग सम्बन्धमा सुधार हुनेछ। भोलि आर्थिक लाभ हुने पनि राम्रो सम्भावना देखिन्छ। तर भोलि मध्याहन पछि भने तपाईको स्थिति बिग्रिने देखिन्छ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा सिद्धि प्राप्त हुनेछ।
भोलि तपाई आफ्नो बोलीको कारण सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ भने भोलि तपाईलाई सम्मान पनि मिल्नेछ। प्रेम सम्बन्धको कारण भोलि तपाई उत्साहित हुनुहुनेछ। यात्राको नयाँ सम्भावना देखा पर्ला। भोलि तपाई व्यापार क्षेत्रमा पनि लाभ उठाउनुहुनेछ। पारिवारिक वातावरण सुखद हुनेछ। साथै भोलि रुचिपूर्ण भोजन पनि प्राप्त हुन सक्ला।
भोलिको द्दिन तपाईको मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ भने भोलि तपाईलाई शारीरिक तथा मानसिकरुपबाट स्फूर्ति बढेको महसुस हुने देखिन्छ। तर भोलि तपाई कतै टाढाको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिं सजक रहनु होला। भोलि तपाईको कलात्मक शक्तिमा वृद्धि हुने दिन परेको छ। तर भोलि तपाईलाई मध्यान्न पछि भने मानसिक तनाव मिल्न सक्ला।
भोलि तपाईको शरीरमा स्फूर्तिको कमि रहनेछ। भोलि आकस्मिक खर्चको सम्भावना रहनेछ। अचल सम्पत्तिको लेनदेनमा सावधान रहनु तपाईको लागि राम्रो हुन सक्ला। भोलि तपाई बौद्धिक छलफलमा भाग नलिनु होला। यात्राको समयमा पनि संयमित रहनु पर्ला। आर्थिक कार्य मात्र नभई कानुनी कार्य देखि टाढा रहनु होला।
भोलि तपाई कुनै पनि कार्य अविचारितापूर्वक नगर्नु होला। निर्णय गर्ने समयमा पनि परिवारको सहयोग बिना नगर्नु भएको राम्रो हुनेछ। भोलि तपाईलाई प्रेम सम्बन्धमा सफलता मिल्न सक्ला। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने देखिन्छ। तर आफ्न परिवारको स्वास्थ्यको कारण भने खर्च र चिन्ता बढ्न सक्ला।
भोलि तपाईको दिन सोचे अनुरुप नहुन सक्ला। भोलि तपाईले आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान दिनु होला। टाढाको यात्रा गर्दा हदै सम्मको संयमता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। भोलि तपाइले आफ्नो बोलीको कारण दुख पाउनु हुने देखिन्छ। भोलि सकेसम्म बोलि र व्यवहारमा समानता राख्नको लागि कोशिष परिवारमा संघर्षको वातावरण हुन सक्छ।
भोलि तपाईको दिगो फाइदा हुने काम सुरु हुने दिन परेको छ। भोलिको दिन तपाईको दिन धेरै लाभप्रद रहन सक्ला। चुनौतीपूर्ण कामको दायित्व लिनाले धेरै परिश्रम गर्नु पर्ला तर भोलि तपाइलाई हरेक कार्यमा सफलता भने पक्कै मिल्न सक्ला। साथीहरू भेटघाटबाट लाभ मिल्न सक्ला। भोलि तपाईलाई रोजगार र व्यापार वृद्धि हुनेछ। साथै विदेशबाट सुसमाचार मिल्न सक्ला।
भोलि तपाईले आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रण राख्नु पर्ने देखिन्छ भने क्रोधलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा शत्रु बढेर जान सक्ला। भोलि तपाईले आफ्नो बोलि र व्यवहारमा नियन्त्रण राख्नु पर्ला। खर्चको मात्रा उच्च हुनेछ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य भोलि खराब हुन सक्ला। तर मध्यान्न पछि भने वित्तीय रूपमा तपाईंले लाभ उठाउनुहुनेछ।
भोलि तपाईं स्थितिमा परिवर्तन अनुभव गर्नुहुनेछ। भोलि पारिवारिक असमझदारीले महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउनेछ। भोलि साझेदारीले लाभ दिलाउन सक्ने भएता पनि संयम भने रहनु पर्ला। धार्मिक कार्य सफल हुन सक्ला। खर्च बढ्ने भएता पनि आर्थिक समस्या भने पढ्ने छैन। अधैर्य व्यवहारले भने समस्या हुन सक्ला।
वैदेशिक यात्राको तयारीमा रहनु हुनेहरुलाई भोलिको दिन धेरै शुभ रहेको छ। भोलि द्वेष वा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। भोलि तपाई प्रतिस्पर्धामा पनि विजयी हुनुहुनेछ। भोलि आर्थिक लाभ हुने काममा हात हाल्ने मौका मिल्नेछ। सामाजिक रुपमा रहेको दायित्व बढ्नेछ। भोलि राजनीतिक रुपमा पनि दिन धेरै शुभ रहेको छ।
अनैतिक र निषेधात्मक कार्य देखि टाढा रहनुनै तपाईको लागि राम्रो हुने देखिन्छ। तपाईको गोप्यता बाहिरिनाले समस्या मिल्ने दिन परेको छ। भोलि तपाईले आर्थिक लेनदेन देखि टाढा रहनु होला भने भोलि तपाईलाई साझेदारी आर्थिक रुपमा भरि पर्ने देखिन्छ। खर्चहरू वृद्धि हुनेछ। भोलि तपाईलाई कानुनी समस्याले सताउन सक्ला।
प्रकाशित : शनिबार, बैशाख २१, २०७६१४:१४
भोलि बैशाख २३ गते सोमबार, तपाइको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् तपाईको राशिफल !